FAQs - Weifang Hualand milina Co., Ltd
Nahoana aho no mividy avy Huamachinery orinasa?
Satria izahay fotsiny ny orinasa. Ny tanjontsika dia ny ho azo antoka fa ny mpanjifa rehetra dia afa-po amin'ny 100% ny fividianana sy ny fiantsenana traikefa. Raha toa ianao ka tsy afa-po tanteraka isika, dia mba hamaly ny olana avy hatrany.
Ahoana raha misy olana miaraka amin'ny zavatra?
Manana fiantohana iray taona, Free fanoloana faritra olana noho ny kalitao Faly koa izahay mba hanaiky miverina ny zavatra ao amin'ny toe-javatra vaovao. Ny fiantohana dia mihatra ihany ho an'ny tany am-boalohany nividy ny milina.
Ahoana no hanafatra?
Rehefa manapa-kevitra ny hividy, dia handefa anareo faktiora proforma miaraka amin'ny banky vaovao, mitondra Pi ity ho any amin'ny banky, ary mangataka mba ho T / T ny petra-bola. Fa tokana napetraka, ny milina dia afaka ho voavonjy ao anatin'ny 5 andro taorian'ny mahazo ny petra-bola, dia hampandehaninareo ho any an seranan-tsambo ka hanafaka anareo amin'ny ranomasina.
Paminaniana tranga fikarakarana bebe kokoa fiampangana, dia afaka hamindra 100% ny fandoavam-bola, dia afaka handamina ny vokatra sy ny fandefasana ny vola fanampiana eo ambanin'ny
-If mbola tsy mahatakatra, masìna ianao, aza mba manontany ahy hestitate
No Hataoko buy 1 ho an'ny santionany?
Yes.Sample azo ekena, Afaka hizaha toetra ny kalitaon'ny santionany.